Madaxweyne Ku Xigeenka Maamulka Hirshabeelle oo Sheegay in Ciidamada Dowladda ay ku Sugnaan doonaan Magaaladda Baladweyne | Allbalcad Online
Home WARARKA Madaxweyne Ku Xigeenka Maamulka Hirshabeelle oo Sheegay in Ciidamada Dowladda ay ku...
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in ciidamada loo baahanyahay in ay sii joogaan gobolka Hiiraan oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagnaayeen ismariwaa ku aadan imaanshaha Madaxweynaha maamulkaasi ee Ali Guudlaawe.
Kulan shalay ay yeesheen Golaha wasiirada ayay uga hadleen ciidanka dhawaan la geeyey magaalada Baladweyne oo ay dowladdu sheegtay in ay aysan waxba kala socon, waxaana uu golahu amray in taliyeyaasha ay ciidanka kusoo celiyaan furimahooda oo laga soo saaro magaalada Baladweyne.
Hasayeeshee waxaa ilaa iyo haatan lagu jahwareersan yahay cidda amartay ciidanka laga dajiyey magaalada Baladweyne . Laakiin Yusuf Dabageed ayaa ku adkaysanaya in lasoo kordhiyo halkii la celin lahaa kuwii horay loo keenay.
Previous articleHogaamiyaha cusub oo jeediyay khudbadii ugu horeysay tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore
Next articleStorm Ana kills dozens in Malawi, Madagascar and Mozambique